नयाँ खुलासाः दिनमा एउटा अण्डा खानुस् यसरी रोग भगाउनुस्, यस्तो छ पकाउने तरिका | Rajmarga
नयाँ खुलासाः दिनमा एउटा अण्डा खानुस् यसरी रोग भगाउनुस्, यस्तो छ पकाउने तरिका
‘सन्डे होस कि मन्डो खानुस् अन्डा’ । यो लाइन अक्सर तपाईले पनि सुन्नु भएकै होला । कतिपय मानिस अन्डा खानुको फाइदा र बेफाइदाका बारेमा पनि तपाईलाई बताएकै होलान् । तर के तपाईलाई थाहा छ कि राम्रो स्वास्थ्यका लागि एक दिनमा कति अन्डा खानु आवश्यक छ र अन्डा पकाउने सही तरिका कस्तो हुन्छ ?
चीनमा करिब १० लाख मानिसमा गरिएको एउटा अध्ययनमा यो कुरा स्पष्ट भएको छ कि दिनमा एउटा अन्डा खाँदा मुटुरोगको खतरा कम गर्न सकिन्छ । विशेषज्ञहरुले राम्रो स्वास्थ्यका लागि अन्डा खान सुझाव दिने गर्दछन् । तर यो पनि भन्ने गर्दछन् कि बढी अन्डा खानु हानिकारक पनि हुन सक्दछ ।
कति अन्डा खाने ?
अधिकांश चिकित्सकहरुले आफ्नो खानामा अन्डालाई समावेश गर्न सल्लाह दिने गर्दछन् । किनभने अन्डा पोषकतत्वले भरपूर हुने गर्दछ । यसमा भिटामिन ए, डी, बी र बी१२का साथै लूटीन र जीएजेनथीनजस्ता पोषक तत्व हुन्छ । यी तत्व आँखाका लागि पनि निकै लाभदायी हुन्छन् ।
ब्रिटेनको डाइटीशियल डाक्टर फ्रेन्की फिलिप्सका अनुसार–एक दिनमा एउटा वा दुई वटा अन्डा खान सकिन्छ ।
उनी भन्छन् कि बढी अन्डा खानु पनि कुनै डरको कुरा होइन । तर यो कुरा ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ कि कुनै पनि खानेकुरा यदि निकै बढी खाइयो भने हामीलाई ती अन्य खानाको पोषक तत्व प्राप्त हुँदैन, जुन हामी खान सक्दैनौ ।
त्यसैले डाइटीशियनहरु अक्सर ब्यालेन्स डाइट लिनुपर्नेमा जोड दिने गर्दछन् ।
‘अन्डा प्रोटिनको उत्तम माध्यम हो, तर हामीले यो पनि ध्यानमा राख्नु पर्दछ कि हामी खानामा धेरै प्रोटिन पहिलादेखि नै लिन्छौ । आवश्यकभन्दा दुई वा तीन गुना बढी प्रोटिनले मृगौलामा नराम्रो असर गर्न सक्दछ।’
अन्डामा जब कोलेस्ट्रोल हुने प्रमाण फेला परेको छ तब ब्रिटिश हर्ट फाइन्डेशनले २००७ मा एक सातामा तीन वतासम्म मात्रै अन्डा खाना सल्लाह दिएको थियो ।
नेशनल हेल्थ सर्भिसको सल्लाअनुसार ‘यद्यपि अन्डामा केही कोलेस्ट्रोल हुन्छ, तर यसको मात्रा हाम्रो रगतमा सेचुरेटेड बसोबाट आएको कोलेस्ट्रोलभन्दा कम हुन्छ ।’
अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अन्डाको कोलेस्ट्रोल ठुलो समस्या होइन । बरु सेचुरेटेड फ्याटबाट बनेको कोलेस्ट्रोलले बढी समस्या निम्ताउने गर्दछ ।
हर्ट युकेका अनुसार एउटा अन्डामा करिब ४.६ ग्राम अर्थात एक चम्चा बोसो हुन्छ । तर यसको मात्र एक चौथाई हिस्साम सेचुरेटेड हुन्छ । अर्थात हेर्ने हो भने त अन्डाका कारणबाट हाम्रो शरीरमा कोलेस्ट्रोलको लेबलमा बढी असर पर्दैन । हो, यदि उक्त अन्डामा मख्खन वा क्रिम मिलाइयो भने कुरा अर्कै हुन सक्दछ ।
ब्रिटेनका पूर्व हेल्थ मिनिस्टर एडविना कुरीले डिसेम्बर १९८८ मा भनेका थिए कि ब्रिटेनमा उत्पादन हुने अधिकाश अन्डामा साल्मोनेला ब्याक्टेरिया हुन्छ । यो ब्याक्टेरियालाई स्वास्थ्यका लागि खतरनाक बताइन्छ । त्यसैले उनको यो भनाइबाट ब्रिटेनमा हलचल मच्चिएको थियो ।
यसका कारण पटि एडविनाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो । यद्यपि त्यतिबेला अन्डामा साल्मोनेलाको केही समस्या अवश्य थियो । १९९० सम्म अन्डाको उत्पादन गर्नेहरुले एउटा भ्याक्सिनेशन कार्यक्रम सुरु गरेका थिए ।
अब तीस वर्षपछि ब्रिटेनको अन्डा स्रसारमा सबैभनदा सुरक्षित छ–कम्तिमा पनि साल्मोनेलाको मामिलामा त अवश्य सुरक्षित मानिन्छ । त्यहाँको बजारमा पाइने अधिकांश अन्डामा अब लायन मार्क लगाइएको हुन्छ, जसले यो बताउँछ कि जुन कुखुराले यो अन्डा दियो त्यसलाई साल्मोनेलाबाट बचाउने इन्जेक्शन दिएको थियो ।
गत वर्ष मात्रै लायन मार्क भएका अन्डालाई गर्भवती महिला र बच्चाका लागि सुरक्षित घोषित गरिएको थियो । विशेषज्ञहरुका अनुसार अब अन्डामा खतरनाक ब्याक्टेरिया निकै कम छ । ‘त्यसैले डराउनुपर्ने कुनै कुरा छैन’।
अन्डा कसरी पकाउने ?
जहाँसम्म अन्डा पकाउने कुरा छ, यसलाई निकै सादा तरिकाले बनाउनुपर्छ वा उमालेर खानु राम्रो हुन्छ । अधिकांश डाइटिशियन सुझाव दिने गर्दछन् कि अन्डाको फ्राई गर्नु हुन्न । किनभने यसो गर्दा यसमा फ्याट र कोलेस्टे«ोलको मात्रा बढ्ने गर्दछ ।
काँचो र हल्का रुपमा पकाइएको अन्डा, जस्तै मायोनिस र आइसक्रिममा हालिन्छ, सही हुन्छ ।किनभने ब्रिटेनमा त्यसमा लायन मार्क हुन्छ र यो पनि पक्का रुपमा बताइन्छ कि उक्त अन्डा कुखुराकै हो ।
अmभै पनि तपाईलाई फुड पोइजनिङको डर छ भने अन्डालाई पूर्णरुपमा पकाएर पनि खान सक्नु हुन्छ ।
अन्डा कसरी भण्डारण गर्ने ?
कहिल्यै पनि फुटेको र क्र्याक भएको अन्डा नकिन्नुस् । किनभने यस्तोमा अन्डाभित्र माटो वा ब्याक्टेरिया प्रवेश गर्ने खतरा रहन्छ । बीबीसी फुटको सल्लाहअनुसार अन्डालाई फ्रिजमा पनि ढाकेर राख्नु राम्रो हुनेछ ।
अन्डाको सेतो हिस्सालाई डब्बामा हालेर तीन सातासम्म फ्रिजमा स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ । जबकि अन्डाको पँहेलो हिस्सालाई तीनदिनसम्म राख्न सकिन्छ । दुवैलाई केही कुराले ढाकेर राख्नुपर्छ । दुवैलाई फ्रिज गरेर दुई महिनासम्म राख्न सकिन्छ ।
अन्डा फ्रेस छ वा छैन यो चेक गर्ने ट्रिक पनि कतिपयलाई थाहा होला । चिसो पानीको एउटा कचौरा लिनुस् । त्यसमा अन्डा हाल्नुस् । यदि अन्डा डुब्यो भने त्यो अन्डा फ्रेस छ भनेर बुझ्नुस । यदि डुबेन भने त्यो कम फ्रेस छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
कुखुराले अन्डा दिएको दिनदेखि २८ दिनसम्म त्यो सही रहन्छ । यसैका साथै उक्त स्थानको पनि सफा हुन जरुरी छ, जहाँ अन्डा बनाउने गरिन्छ ।
अन्डाबाट एलर्जी ?
कतिपयलाई अन्डाबाट पनि एलर्जी हुने गर्दछ । पाँच वर्षदेखि कम उमेरका बालबालिकालाई यो समस्या बढी हुने गर्दछ । अन्डाबाट भएको एलर्जीका केही लक्षणः
–मुख वरपर रातो हुनु र चिलाउनु ।
तर कमै मात्र यस्तो हुन्छ कि यसको रिएक्शन प्राणघातक होस् । तर एलर्जी भएको अवस्थामा सधैं चिकित्सकको सल्लाह लिनु आवश्यक छ।
अन्त्यमा डाक्टर फिलिप्स भन्छन्–जसलाई यस्तो कुनै एलर्जी छैन । उनीहरुले कुनै पनि रुपमा अन्डा खान सक्छन्, तर अन्डालाई कसरी बनाइँदैछ, त्यसलाई भने अवश्यक ध्यान दिन जरुरी छ। बीबीसी हिन्दी
Previous post: यसरी हुन्छ युरिक एसिड, यी हुन कारण र बच्ने ८ उपाय
Next post: भारतमा देखिएको निपाह नेपालमा पनि आउने सम्भावना, भेट्ने वित्तिकै ज्यानै लिने के हो निपाह ?